Miisaaniyadda Guga ee Xisbiga SD - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Miisaaniyadda Guga ee Xisbiga SD
La daabacay onsdag 25 april 2012 kl 17.05
Xisbiga Sverigedemokraterna ayaa miisaaniyaddiisa xilliga guga ku soo jeediyey in la dhimo 90% soo-galootiga dalka ku yimaada sidii ey qaraabadood ula midoobi lahaayeen. Xisbigu wuxuu sidoo kale soo jeediyay in go'aanka soo-galootinimada lagu saleeyo midka u degsan ururka caalamiga ee Qaramada Midoobey.
In sharciga degenaansho uu noqdo oo keliya mid aan joogto ahayn isla markaana la adkeeyo mideeynta qaraabada.
- Habka ugu wanaagsan ee shaqa lagu abuuri karo ayaa ah in la adkeeyo lana qaado tallaabo masuuliyadi ku dheehan tahay ee la xiriirta siyaasadda soo-galootiga, sida uu sheegay af-hayeenka xisbiga SD ee arrimmaha dhaqaalaha, Erik Almqvist. Isagoona xoogga saaray siyaasadda soo-galootiga iyo midda shaqa-la'aanta dhallinyarada kolkii uu soo ban-dhigayay siyaasadda xisbigiisa ee miisaaniyadda guga.
Xisbiga SD ayaa qaba inuu baabi'iyo qidmadda dhimista shaqaaleeynta ee dhallin-yarada uuna ku wajaho tallaabooyin gaar ah. Waxaa tallaabooyinkaa ka mid ah in la dhimo cashuurta shaqaaleeynta ee shirkadaha yar-yar, iyo kuwa meel dhexaadka ah. Sidoo kale siyaasad masuuliyad leh ee habka ceeymiska xanuunka ee shirkadaha yar-yar iyo miisaaniyad gelin dhanka tacliinta.